16 wadan oo u soo baxay wareega bug baxda koobka adduunka – Puntland Post
Posted on June 29, 2018 June 29, 2018 by Liban Yusuf
16 wadan oo u soo baxay wareega bug baxda koobka adduunka
Dhacdada ugu weyn kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 oo ka socota dalka Ruusha ayaa xalay lasoo gabagabeeyay waajigii hore group-yada.
Waxaana ka soo gubdbay 16 xul qaran oo kamid ah 32-dii xul qaran ee ee tagey Ruushka, kuwaas oo kala ah dalalka Russia, Brazil, Uruguay, Spain, Portugal, France, Denmark, Croatia, Argentina, , Switzerland, Sweden, Mexico, Belgium, England, Colombia iyo Japan.
Xulalkii ka socday qaarada Afrika oo ahaa 5 xul qaran ayaa dhamaantood ka haray tartankan, waxaana xulkii ugu danbeeyay oo ahaa Senegal uu ku haray sharci ay FIFA dejisay oo ah in lagu kala baxo dhanka ciyaar wanaagga iyadoo la xisaabinayo calaamadaha ay qaateen labada wadan ee isku dhibcaha noqda.
Xulka Jaban oo ah xulka kaliya ee ka socda qaarada Aasiya oo u gudbay wareega bug baxda ayaa ku soo baxay sharcigakan, kadib markii ay dhibcaha iyo goolasha ka simeen xulka Senegal, Jaban ayaa la guddoonsiiyay afar kaar oo hurdi/jaallo ah, halka Senegal ay lix jaallo aruursatay, taasoo ka dhigan in Japan ay ciyaar wanaag kusoo gudubtay.
Xulkii difaacanay koobkii adduunka ee sanadkii 2014-kii ee Germany ayaa kamid noqday 16-kii xul qaran ee ka haray tartankan.
Xulal qaramada u soo baxay wareega bug baxda (16-ka) ayaa qaabkan isugu aaday
France iyo Argentina
Uruguay iyo Portugal
Spain iyo Russia
Croatia iyo Denmark
Brazil iyo Mexico
Sweden iyo Switzerland
Belgium iyo Japan
Colombia iyo England
Kulamada wareega bug baxa (16-ka) ayaa la ciyaari doonaa 30 June ilaa 3 July 2018
Wareega sideed dhammaadka (Quarter Finals)
Xulalka France iyo Argentina kii soo baxa wuxuu la ciyaari doonaa midkoood xulalka
Uruguay iyo Portugal kii soo baxa.
Xulalka Spain iyo Russia kii soo baxa wuxuu la ciyaari doonaa midkood xulalka Croatia iyo Denmark kii soo baxa.
Xulalka Brazil iyo Mexico kii soo baxa wuxuu la ciyaari doonaa xulalka Sweden iyo Switzerland kii soo baxa.
Xulalka Belgium iyo Japan kii soo baxa waxa uu la ciyaari doonaa xulalka Colombia iyo England kii soo baxa.
Kulamada wareega sideed dhammaadka ayaa la ciyaari doonaa 6 July ilaa 7 July 2018.
Wareega Afar dhammaadka ( Semifinals)
Wadamada France iyo Argentina ama Uruguay iyo Portugal kii soo baxa wuxuu ku dhici doonaa Spain iyo Russia kii soo baxa ama Croatia iyo Denmark
Xulalka Brazil iyo Mexico, iyo Sweden iyo Switzerland kii soo baxa wuxuu ku dhici doonaa Belgium iyo Japan ama Colombia iyo England.
Kulamada wareega Afar dhammaadka ayaa la ciyaari doonaa 10 July ilaa 11 July 2018.
Kama dambeysta (Final)
Ciyaarta kama dambeysta (Final) ee koobka adduunka 2018-ka waxaa lagu ciyaari doonaa garoon ku yaal magaalada Moscow oo la yiraahdo Luzhniki, 15 July 2018.